Labada shirguddoon iyamaa guulaysan?
Home QORMOOYIN Labada shirguddoon iyamaa guulaysan?
Shirgudoonka golaha wakiiladu waa saddex xubnood oo kala ah 1- Gudoomiye , 2- Gudoomiye ku xigeen 1aad 3- Gudoomiye ku xigeenka 2 aad , caalamka waxa looga yaqaanaa ( House Speaker).
Qodobka 44naad ee dastuurka jamhuuriyada Somaliland qaybta 1aad , qaybta 2aad waxa uu sheegayaa hadii madaxweynuhu isugu yeedhi waayo golaha ayaa iskii u kulmaya maalinta 45 aad laga soo bilaabo mudadii natiijada , qaybta 3aad golaha cusub waxa furaya gudoomiyaha maxkamada sare oo dhaarinaya xubnaha golaha, ka dib xubinta ugu da’da weyn ayaa shir-gudoominaya golaha oo iska dhex dooran doona gudoomiye iyo laba gudoomiye ku-xigeen.
Sida ku cad qodobka 45naad ee dastuurka jamhuuriyada Somaliland faqradiisa 3aad , go’aamada golaha wakiiladu waxa ay ku ansaxayaan hal dheeri tirada golaha joogta markaa oo ah aqlabiyad fudud ( Simple Majority) , marka laga reebo xaaladaha dastuurka ama xeer hoosaadka goluhu sheego aqlabiyad kale.
Previous articleYaa ka danbeeya dagaalka ku socda reer Saaxil?
Next articleTallaabo Qofka Kasta oo Muslim ah u Noqonaysa Sadaqo iyo Xasanaad Jaari ah: u Hiili Walaalkaa ama Walaashaa oo gargaar u baahan